Voadika ny 14 Septambra 2017 2:21 GMT
(Marihina fa tamin'ny 28 Martsa 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
1) Fandravana: namaly ny vaovao momba ny fandravana ny Trano Fandefasana sarimihetsika Modhumita , iray amin'ireo trano fijerena sarimihetsika tranainy indrindra sy malaza ao Dhaka i Dipu, ilay “Mpanoratra Adalam-pitiavana”.
2) Lamaody: manoritsoritra ny zava-niainany vao haingana i Shafiur fa mahazo famantarana (vaovao) indray ny Bangladeshis any amin'ny Fanjakana Britanika noho ny ‘curry’ sy ny ‘olo-malazan'ny fananahana.’
3) Fanadihadiana: namoaka ny tatitra fanadihadiana momba ny Hizb_ut-Tahrir — iray amin'ireo fikambanana Islamista ekstremista indrindra eran-tany — ilay mpanao gazety Tasneem Khalil .
4) Fanambadiana Namboarina: Toy ny zazavavy desi maro any Andrefana, namakivaky ny nofy ratsin'ny fanambadiana namboariana avy amin'ny ray aman-dreny i Kia Abdullah. Vakio ny bilaoginy ‘Tanora, afaka, ary diso fanantenana?’ izay natokana handraketana ny dingana sy ny fandriky ny fanambadiana namboarina.
5) Tantara An-tsehatra: nizara sary maromaron'ny Rabindranath Tagore tamin'ny tantara an-tsehatra “Tasher Desh” izay nilalaovany vao haingana i Mahreen.
6) Lahatsary: ​​Nanatontosa fanadihadiana fohy (2:04 minitra) mitondra ny lohateny hoe ‘fiandohan'ny vanim-potoana’ izay mendrika ho jerena i Shakia .
7) Fanaintainana: nanao ny tsindrony voalohany i Scribbles ary mitantara ny ahiahiny sy ny fihetseham-pony momba izany.
8) Lalàna: mihevitra i Sadat Shahriar fa lasa lalàna anarany fotsiny ny lalàna iadiana amin'ny fifohana sigara any Bangladesh.
9) Filaharana: nahita i Sakib fa i Bangladesh no firenena manankarena indrindra manerantany faha 31 raha ny harin-karena faobe amin'ny mponina ao amin'ny firenena no jerena.
10) Bangla mamahana bilaogy manan-danja: nahatratra jeripejy 1 tapitrisa ny sehatra famahanana bilaogy bangla ‘Bandh Bhanger Awaz’ telo volana taorian'ny nivoahany .